Will Smith iyo qoyskiisa waxay ku sugnaayeen Apple Park iyagoo ka wada hadlaya cilmiga deegaanka | Wararka IPhone
Will Smith iyo qoyskiisa waxay ku sugnaayeen Apple Park iyagoo ka wada hadlaya deegaanka
Kariim Hmeidan | | Noticias
Waad ogtahay waxa ragga jecel Cupertino isku hareeree dadka warbaahinta. Dadka caanka ah ee ka caawiya suuq geynta laga bilaabo shirkadda tiknoolajiyadda illaa falsafadda shirkadeed iskeed isu iibiso. Waxaan kaliya u baahanahay inaan aragno dhiirrigelinta Apple TV + kaas oo diiradda saaray dadka caanka ah ee kaqeyb qaatay waxyaabaha ay ka kooban yihiin.
Oo aan ku sii wadayno dadka caanka ah, hadda waxaan ogaanay taas Will Smith iyo qoyskiisa waxay ku sugnaayeen Apple Park iyagoo ka wada hadlaya arrimaha deegaanka iyo caqabadaha cagaaran ee dhulkeena. Boodka ka dib waxaan kuu sheegeynaa dhammaan faahfaahinta booqashadan muhiimka ah ee qoyska Smith ay ku tageen Apple Park.
Qof kastaa wuu u qalmaa inuu helo biyo tayo leh. Waad ku mahadsantahay hogaaminta dacwada, @officialjaden, iyo inaad nala wadaagto dareenkaaga deegaanka maanta Apple Park. Xamaasaddaadu waa la is qaadsiinayaa! 🌎 pic.twitter.com/2juv8zxMWT
Sidaad u jeeddoba isagaa iska lahaa Tim Cook oo ku dhawaaqay booqashadan muhiimka ah ee Apple Park bartiisa Twitter-ka. Will Smith ayaa yimid xafiisyada Cupertino isaga iyo xaaskiisa Jada Smith, iyo wiilkooda Jaden Smith si ay ugala hadlaan arrimaha deegaanka. Booqashadu waa qayb ka mid ah waxqabadka shirkadda Jaden Smith, Just Water, waa shirkad ku iibisa biyaha macdanta dhalooyinka ku jira deegaanka caag ka madhan.
Iyo wax kasta Waa qeyb ka mid ah dabaaldegga Maalinta Caalamiga ee Adduunka oo loo qorsheeyay 22-ka Abriil. Maalin la filayo in wiilasha Cupertino ay ku fuliyaan ficilo kala duwan Dukaanka Apple-ga oo leh khaasatan Maanta kal-fadhiyada Apple ee ku saabsan deegaanka. Waxaan sidoo kale caqabad gaar ah ku lahaan doonnaa saacadaha Apple-ka si aan ugu darsano layliskeena si loo yareeyo wasakheynta loona ilaaliyo meeraheena.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Will Smith iyo qoyskiisa waxay ku sugnaayeen Apple Park iyagoo ka wada hadlaya deegaanka
Waraaqaha animated-ka ayaa mustaqbalka imaan doona WhatsApp